Galmudug oo soo afjartay dagaalladii ay la gashay firxadkii al-Shabaab
Ciidamada maamul-goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay soo gunaanadeen dagaalladii ay maalmihii u dambeeyay kula jireen kooxo ka tirsan al-shabaab oo Puntland lagu soo jabiyay.
Afhayeen u hadlay maamulka ayaa xaqiijiyay in howlgalkii ay ciidamadu ka wadeen deegaannada Af-barwaaqo, Diinooda, Towfiiq iyo Gal-hagoog la soo gunaanaday, si weynna loo jabiyay firxadkii al-Shabaab ee soo galay degaannadaas kadib markii lagu jabiyay dagaallo ay argagixisadu la gashay ciidamada maamul-goboleedka Puntland.
Afhayeenka Galmudug ayaa sheegay in 110-maxbuus ay ka qabteen kooxihii ay dagaallameen, sidoo kalena ay ku dileen dagaallada illaa 115 ruux oo kale, iyadoo dhimashada iyo dhaawaca dhanka ciidamada maamulku uu fara ku tiris uun ahaa.
Shabaab oo amaro dul dhigay Odayaashii Warshubo ay ka afduubteen
Xoogaga Al Shabaab ayaa amaro dul dhigay Odayaashii ay ka afduubteen deegaanka Warshubo oo ka tirsan Gobolka Mudug, Odayaashaasi oo la geeyay Magaalada Xarardheere ee isla Gobolkaasi.
Amarka Shabaab ay dul dhigeen Odayaashaan ayaa waxa uu ahaa in muddo afar bil gudahooda ah ay ku keenaan dhalinyaro lagu biiriyo Shabaab, si ay uga qayb qaataan dagaalka Shabaab ay kula jiraan Dowladda Somaliya iyo ciidanka AMISOM.
Nin ka gaabsaday magaciisa in la adeegsado, ayaa u sheegay Warbaahinta amarkaasi inay u sheegeen Shabaabka Odayaashaasi oo ku xiran Magaalada Xarardheere.
Waxa uu tilmaamay in weli aanan la soo daynin Odayaasha oo ay u xiran yihiin Ururka Shabaab laakiin kaliya loo sheegay in muddo afar bil gudahood ah laga doonaayo dhalinyaro badan oo lagu biiriyo Shabaab, haddii arintaasi ay sameyn waayaan tallaabo laga qaadi doono.
Sabtidii kowda luulyo 2017 ayeey aheyd markii Odayaashaan Shabaabka ay ka xir xireen deegaanka Warshubo oo dhaca duleedka Degmada Xarardheere, kadib markii Odayaasha ay diideen dalab ka yimid Shabaab oo ahaa inay keenaan dhalinyaro dagaalanta iyo hub intaba.
Shabaabka ayaa xilliyada ay dareemaan culeesaad Militari waxa ay dadka shacabka ah ku qasbaan inay keenaan dhalinyaro iyo qarash dagaalka lagu galo intaba.
Ciidanka Xoogga dalka Somalia iyo kuwa AMISOM ayaa Gobolka Shabellaha Dhexe ka wada hawlgal ka dhan ah Ururka Al Shabaab si guud ahaan Gobolkaasi looga saaro.
Xorriyo 1 Views : 10643